Kuchamhembe kwemuganhu wenyika - The Zimbabwean
Kuchamhembe kwemuganhu wenyika
Mumazuva mashoma apfuura ndakaudza vabereki pamusangano wemunharaunda , “Hapana mhuri munharaunda ino yeMbare isina vamwe vayo vari kugara kana kushanda kuSouth Africa”.
Mashoko angu akazadziswa chiripo- ripotyo. Mudzimai wepamba apa akaitisa vanakomana vake vashanu nemusikana mumwechete mudungwe.
Pavakomana vake vana, mumwechete oga ndiye anogara muMbare, vamwe vose vanoshanda “kwakadziva kuchamhembe kwenyika”. Leonard anoshanda papurazi rinorimwa mazambiringa kuCape Town, Francis pakambani inoita zvekuvaka kuJohannesburg, vaviri vasara vanoshanda ikoko “kuchamhembe kwakadziva kumuganhu”.Murume ari kuCape Town anoti anogutsikana uye akadekara nemagariro ake uye anoti vaanoshanda navo vanomutambira uye vanomuda, asi kuJohannesburg “kunobhebha” zvekuti unofanira kugara pedyo neshamwari dzako dzekuZimbabwe kuitira kuchengetedzwa.
VaTsuro vaimbonotenga zvidimbu zvekugadzirisa motokari kuSouth Africa vachitengesa muno vachiwana mbasera. Vazhinji vari mubasa rekuenda kunze kwenyika kunotenga vachizotengesa muno vaive nepfungwa iyi, nekudaro vaTsuro vakaruka rimwe zano rakachenjera rinoratidza hunyanzvi. Vanoronga “zvemichato” yepamusoro kuSouth Africa uye panguva ino kudivi rino rekumuganhu wenyika. Unoda muchato wemhando yechizvino zvino ungafananidzwe newekuSouth Africa?VaTsuro ndiye murume wekuona. Unoda muzvambarara wemotokaro yechimanje manje pamuchato wemwanasikana wako, kana zvinobhururuka kuitira kuti uchatire muchadenga? Bvunza vaTsuro. Kunyangwe zvavo vari murombo, vakadzidza kufadza vane mari.
Vashandi vemuZimbabwe vari nyore kudzvanyirira. Murume wemudzimai ane vana vashanu, anogadzira motokari, haasati abhadharwa mari yaakashandira kwegore rose, uye atove nenguva achiedza kuiteverera kuitira mudzimai wake nemhuri, asi ari kukundikana. Muridzi wekambani haachisina mari kubhanga uye pavaishandira pakavharwa. Kumushandi anenge abva kune imwe nyika, zvinotonyanyonetsa kuwana ruenzaniso.
Harold atove nenguva achirwisana nechirwere chenhuta yepahuro. Aive asingachakwanisi kutaura. Masvondo mashoma apfuura akaenda “kwakadzika kuchamhembe” kunorapwa, asi nhuta haina kumurega achipukunyuka. Mazuva mashoma mushure mekunge aenda, akadzoka changove chando.
Nguva nenguva vanhu vemuZimbabwe vanodzoka kumusha nenzira iyoyi.
Pachinzvimbo chekuti mari inova dambudziko kuwana iunze kugatsikana, mhuri inenge yotarisana nemutoro wekuunza chitunha kumusha, zvinova zvinodhura.
Hupenyu hunotyisa, hwakaoma uye hauna kugadzikana, kana zvichireva rombo rakanaka kumwanakomana kana mwanasikana ari kufamba mumigwagwa yeJo’burg, Durban kana Cape Town, akaburitsa ziso kutsvaga basa, asina pekugara, asina hama kana shamwari, azere nekutya uye asingazivi kuti chaachadya chichabvepi.
Mumasvondo matatu apfuura handina zororo. Muvakidzani wedu “muporofita”
anogaroparidzira vechidiki nevana munhandare diki iri pedyo. Vaimbotamba mutambo wenhabvu imomo asi iye zvino mazara midziyo yekushamarara inenge ichitinhira nezwi “remuporofita”. Pakati pekushamarara nekushevedzera pane mutinhimira unokuvadza nzeve wemimanzi yesvondo. Ndinotoda zvinovhara nzeve kuti ndikwanise kurara.
Uyu mubvunzo zvekare weruenzaniso, vatinoshanda navo muboka redu reruenzaniso nerunyararo vanotenderana nazvo. Kutambudzika murunyararo hazvireve kuti ndiyo nduramo. Kusimuka uchirwira ruenzaniso, zvisina hasha kana chisimba inzira iri nani. Panofanira kuve nenzvimbo yekugara zvakanaka yedu tose uye mweya wekugamuchira munhu wose muMbare. Tine rusununguko rwekutaura zvaungada nerusununguko rwekunamata zvinoenderana nesarudzo yako, zvokwadi. Asi rusununguko rwangu rwunopera kana rwemuvakidzani wangu rwatanga.